Madaxweynaha Soomaaliya oo Booqday Ciidamo Jubbalandna oo dhamaystay tababar – WARSOOR
Madaxweynaha Soomaaliya oo Booqday Ciidamo Jubbalandna oo dhamaystay tababar
Kismaanyo – (warsoor) – Madaxweynaha Dawladda federaalka ee Soomaaliya Md. Xasan Sheekh Maxamud oo ku sugan magaaladda Kismaanyo ayaa maanta ka qayb-galay tababar loo soo xidhay ciidamadda maamul goboleedka Jubbaland.
Taliyaha qaybta 43-aad ee xooga dalka Soomaaliyeed ayaa warbixin ka siiyey madaxweyne Xasan Sheekh Noocyadda tababaradda ee ay qaateen ciidamadu iyo guud ahaan xaaladda ciidamada ay ku sugan yihiin.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa hambalyo u diray ciidamada dhamaystay tababarka isku dhaf ciidamada xooga dalka Soomaaliyee. Waxaanu sheegay in ciidamadda loo baahan yahay in difaacaan dalka. Madaxweyne Xasan ayaa sheegay in dawladdu ku dadaali doonto sidii loo dhamaystiri lahaa baahiyaha kala duwan ee ciidamadda.
Ra’iisal Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya oo ka Dareen Celiyey Inuu Ku Guulaystay Kursiga Koowaad ee Xildhibaanada Waqooyiga